Sat, Jul 21, 2018 | 19:18:20 NST
काखमा छैनन्, सडकमा भेटिएलान् त छोराछोरी !
मिलन तिमिल्सिना - ‘ओहो के छ खबर ? छोराछोरी कतिमा पढ्ने भए ?’ धेरैपछि फोनमा, च्याटमा र बाटोमा भेट हुनेहरुले पहिले यही सोध्छन् । छैन भन्न नपाउँदै अर्को प्रश्न आउँछ, ‘कति भो र बिहे गरेको ?’ भर्खरै हो भनेर टार्न थालेको पनि निकै वर्ष भैसकेछ । ‘दाइ म्यारिज एनिभर्सरीमा के गर्ने त ?’
प्रकाश वस्तीकी छोरी भन्छिन् ‘दशा लागेपछि के गर्ने ?’
प्रविणता वस्ती अलि वर्ष अघिको कुरा हो आमा घरमा रुद्रीको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । गुरु आउन अलि ढिला भयो । बुबा भने आफ्नो कामतिर लाग्नुभयो । सानै भएपनि घरको पूजा छोडेर हिडेको मन परेन । तर मैले के नै भन्न सक्थे र ?
पत्रकारको चुनावः मध्यरातको भद्रगोल
सुनिल न्यौपाने/उज्यालो । संविधानसभामा बैठक बसाउन कोरम पुर्‍याउनै मुश्किल परेको, सभाषद बैठकमा नआएको वा आए पनि तुरुन्तै बाहिरिएको विषय थुप्रैपटक पत्रकारले समाचार बनाए । तर तीनै नेपाल पत्रकार महासंघको बैशाख २०–२१ मा भएको महाधिवेशनमा ठ्याक्कै त्यही दृष्य देखिन्थ्यो ।
चिनीबाट कति फाइदा कति हानी ?
डा. अरुणा उप्रेती – चिनीको रासायनिक नाम सुक्रोज हो । यसलाई मन्द सेतो विष भनिन्छ । अहिले त यसलाई सेतो मृत्यु पनि भनिन्छ । यो एकदम क्यालोरीयुक्त हुन्छ र यसमा शरीरलाई चाहिने खनिज पदार्थ, भिटामिन र लवणको एक अंश पनि हुँदैन ।
मुस्ताङमा गुरुजीले झण्डै लिए ज्यान (तस्बिरसहित)
सुनिल न्यौपाने/उज्यालो । मुस्ताङ नेपालका लागि एउटा फरक भूगोल मात्रै होइन प्रकृतिको ‘स्वर्ग’ पनि हो । त्यसैले त्यहाँको यात्रा निक्कै रोचक हुन्छ । जोमसोमका होटलवालाले नेपाली पर्यटकलाई गर्ने बेवास्ता र गाडी सञ्चालकको दादागिरीलाई छल्दै मुस्ताङको बाँकी यात्रा कम चाखपूर्ण हुन्न ।
गरिबले उपचार गर्न कतिञ्जेल भीख माग्ने ?
विनोद ढकाल – सरकारले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ तर उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने कति छन् कति । गाउँघरमा के रोग लाग्यो भन्ने थाहा नपाएर ज्यान गुमाउनेको त गणना नै हुन्न । डाक्टरले रोग पत्ता लगाइसकेपछि उपचार खर्चमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने होला ?
उज्यालोमा यसरी लिसो झैं टाँसिएँ
मिलन तिमिल्सिना - ‘ओहो १४ वर्ष भैसक्यो उज्यालोमा काम थालेको !’ सुन्नेहरु जिब्रो टोक्छन् । यतिका वर्ष एउटै अफिसमा काम गर्दा बोर लाग्दैन भन्ने धेरैको जिज्ञासामा मेरो एउटै जवाफ हुन्छ, ‘खै अहिलेसम्म त लागेको छैन, बोर लागेको दिन त छाडेर हिँडिहाल्छु नि ।’
ठूलालाई टाट पल्टाउने कस्तो यो टार
मिलन तिमिल्सिना – खेतीपाती गर्नेलाई डाँडापाखा र भिरपहराको जमीनभन्दा बेंसी र टार फाप्छ । कुटोकोदालो बोकेर टारमा बसेपछि ओइलाएर लडेको फूर्तिफार्ती ह्वात्तै बढ्छ । दुईचार फेर ओहोदोहोर गर्ने बित्तिकै टारमा लगाएको बालिनाली हराभरा हुन्छ ।
लक्ष्मण कार्की – झिसमिसेमा आँखा मिच्दै उठ्यो, नित्य कर्म सक्ने वित्तिकै चोकतिर उक्लियो । टायरको जोरजाम गर्‍यो । मट्टितेल खन्यायो, पुल्ठो झोस्यो अनि नारा उराल्यो–‘प्रतिगमन मुर्दावाद ।’
देउता बस्नेमा चढियो तर भेटिएन
मिलन तिमिल्सिना - ‘आँबै चिलगाडीमा मान्छे पनि हुन्छन् ?’ पारी कुम्पुरडाँडो माथिबाट निस्केर हाम्रो घरको माथि हुँदै पर आकाशमा देखिएको चरोजस्तो सानो जिनिशलार्ई देखाउँदै हामी सोध्थ्यौं ।
कम्युनिष्टमा सधैं कचकच
मिलन तिमिल्सिना – बैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस । लुकको राजनीतिमा महत्वपूर्ण शक्ति बन्न सफल भएपनि कम्युनिष्टहरु आफैं भने सधैं असफल जस्तै छन् । ठूलो शक्ति भएर पनि कम्युनिष्टहरु किन कमजोर हुँदैछन् त ?
स्याउको गाउँमा मुखियाको ह्याउ
प्रकाश ढकाल – मुस्ताङको मार्फा गाविसको स्याउबारी देश विदेशमा समेत प्रख्यात छ । स्याउको राजधानी भनेर चिनिन्छ मार्फालाई । मार्फा गाउँ स्याउसँगै मुखिया प्रथाले पनि चर्चित छ । गाउँमा हुने घटना सबैभन्दा पहिले गाउँ मुखियासम्म पुग्छ ।
जहाँ कुकुर बिरालोलार्इ माया गरिन्छ तर मान्छेलाई गरिन्न
सुजना राना - लेबननका मान्छेले बरु कुकुर बिरालोलाई माया गर्छन् तर हामीजस्ता मान्छेलाई गर्दैनन् । आफ्नो देश सम्झेर धेरै दुःख लाग्यो । आफ्नै ठाउँमा रोजगारी हुँदो हो त यसरी अर्काको देशमा आएर यो हैरानी खेप्नुपर्ने नै थिएन भन्ने लाग्यो ।
सुन्दर मुस्ताङ र निमठ्ठिएका मान्छेहरु (सुन्दर तस्बिरसहित)
सुनिल न्यौपाने/उज्यालो । मुस्ताङको प्रकृति जति सुन्दर छ, त्यहाँका बासिन्दा उति उदार छैनन् भन्ने पहिलेदेखि नै सुनेको हो । भयो पनि त्यस्तै ! त्यसको साख्खै उदाहरण पस्किइन् होटलकी साहुनीले । झोंकै झोंकमा एक छाक छोडेर सुतेका हामीलाई भोलीपल्ट उठ्दा हिमालले न्यायो स्वागत गरिरहेको रहेछ ।
भूतलाई छक्याएको त्यो बिहान
मिलन तिमिल्सिना - ‘हैन अहिले त राति नै छ, तिमीहरु कहाँ जान लागेका । भूतले खाला । एकछिन सुत । उज्यालो भएपछि जालाऊ’ तल पिंढीबाट हजुरबा कराउनुभयो । हजुरबाको कुरा कसले सुनोस् । हैन हामी गयौं भनेर हत्तपत्त लुगासुगा लगाएर बेलुकीको भात टापटिप पारी निलकण्ठसँगै हिँडियो ।
तेश्रोलिंगी अधिकार प्राप्तिमा वितेको वर्ष
माधव दुलाल – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा २०७० साल विगतका वर्षहरुभन्दा केही सफल रह्यो । देशका विभिन्न जिल्लाबाट १० जनाले लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख गरेको नागरिकता पाए ।
लेबननीहरु साह्रै अल्छी, जुत्तापनि लगाइदिनुपर्ने
कृष्ण गुरागाईं - ‘मेरो घरमा आधा बेरुत र आधा पेरिस बस्ने मेडम र उनका १४ वर्षका छोरा छन् । मेरी मेडमलाई त बाहिर निस्कने बेला मैले जुत्ता लगाइदिनुपर्छ । बेडमा खानु पुर्‍याउनु, खाएका भाँडाकुँडा उठाउनु त सामान्य काम भइहाल्यो’ लेबननमा काम गर्ने एक नेपाली महिलाले भनिन् ।
रेगिस्तान छाडेपछि के गर्दै होलान् बाजे ?
भानु सुनुवार – एकदिन म दिउँसो खाना खाने छुट्टीमा कुटीतिर जाँदा बाटोमा भेटिए बाजे । मैले काम गर्ने पसल र बस्ने कुटी बिचमा पथ्र्यो बाजेले काम गर्ने ठाउँ । ‘खाना खानुभयो बाजे ?’ मेरो सामन्य प्रश्नमा बाजे एक्कासी बम्किए । बाजे भनेको रिस उठेछ उनलाई । केही दिनसम्म त बुढा मसँग बोल्दै बोलेनन् ।
लेबननमा ट्याक्सी चढ्न नजान्दा...
कृष्ण गुरागाईं – मध्यरातको १ बज्नै लाग्दा लेबनन बेरुतको हामरास्थित मे फ्लावर होटेलको गेटमा पुर्‍याएर ट्याक्सीले ३० अमेरिकी डलर अर्थात ४५ हजार लेबनानी पाउण्ड (झण्डै ३ हजार रुपैयाँ) मागेपछि झसंग भइयो ।
काकाले भने–पत्रकारलाई त अरिंगालले टोक्दैन होला नि !
मिलन तिमिल्सिना - झमक्कै साँझ पर्न लाग्दा पल्लो गाउँका राजकुमार काका हूल बाँधेर तीनतले खेततिर झरे । हातमा बाँसको लामो भाटा, थोत्रो बोरा, मट्टितेलको बोतल देखेपछि मैले अड्कल लगाएँ–ठिटाहरु अरिंगाल पोल्न आएका रैछन् ।
कृष्ण पहाडीज्यूको मुखबाट नेपालीहरूले सुन्न चाहेका कुरा
भरत दाहाल - मानवता विरोधी युद्ध अपराध गर्नेहरूलार्इ दण्डित गर्न "रोम विधान"लार्इ अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर कृष्ण पहाडी आमरण अनशन बस्नु भएको सकारात्मक समाचार आएको छ। यो नीतिगत मागप्रति कुनै नेपालीको दुर्इमत नहुनु पर्छ । तर व्यवहारिक पक्षबाट हेर्दा उहाँबाट नेपालीहरूले केहि प्रश्नको उत्तर चाहन्छन्, जसमा म पनि रहेको छुँ।
वा ! क्या माल
मिलन तिमिल्सिना –आफ्नो दिनचर्या, उठबस, कामधन्दा, सोचविचार र योजनामा माल शब्दलाई बिभिन्न रुपमा परिभाषित र प्रयोग गर्छन् । कुनै विशेष वस्तु या धनसम्पत्ति र सरसामानलाई मात्र होइन, धेरैले माललाई अश्लिल र उट्पटयाङ ढंगले पनि बुझ्ने गर्छन् ।
लक्ष्मी बिष्ट - केन्याको नैरोवीमा एउटा कार्यक्रम आयोजना हुँदै रहेछ, जसमा हाम्रो संस्थाबाट मेरो नाम प्रस्तावित भएको रहेछ । धेरै अचम्म र केही खुसी पनि लाग्यो, के गरौं कसो गरौं जस्तो भयो । त्यो ठाउँ कस्तो होला ? कस्ता मानिसहरु होलान् ? के के कुरा प्रस्तुत गर्ने होला ?
छोरीका बाबुको यो कस्तो पीडा
गोकर्ण अर्याल - मेरो जन्मस्थान धादिङ जिल्ला नलाङ गा.वि.स. वडा नं. २ आप्रिछाप गाउँबेशी, भीरपखेरा भएकाले बालीनाली फलाउन मुश्किल थियो । त्यहाँबाट बेचबिखन गरी चितवन जिल्ला कुमरोज गाविस वडा नं. ७ मा २०४३ सालमा बसाईं सरी ४ कठ्ठा जमिन किनी बसेका थियौं ।
मणिरत्न शाक्य – सुरु सुरुमा आकाशको माथिल्लो भागमा बिजुली चम्कने गर्छ । यस्तो चट्याङबाट मानवीय हानी नोक्सानी हुने गर्दैन । तर जव आकाशमा छिटो छिटो बिजुली चम्कने र क्षण क्षणमा मेघ गर्जनको आवाज सुनिन थाल्छ तब चट्याङको डर बढ्दै जान्छ ।
चौका र छक्कासँगै सिकेको क्रिकेटको बाह्रखरी
मिलन तिमिल्सिना - सबैजना क्रिकेट हेर्न बसेपछि आफु त्यसै चूप लागेर बस्ने कुरा पनि भएन । साथीहरुसँग हार मिलाएर हेर्न बसियो । तर मेसोमेलो केही पाइएन । कहाँ के भएपछि ताली र हुटिङ गर्ने हो भेऊ खुट्याउनै गाह्रो भयो । कराउने बेला भयो होला भनेर अरु भन्दा छिटो उफ्रन खोजेको एक्लै परियो ।
चैत महिनाको माहात्म्य
सिल्भिया राजोपाध्याय – राजनैतिक उथलपुथल हुने महिनाको रुपमा परिचित चैत महिनाको माहात्म्य यतिमा मात्र सिमित छैन । अभिभावकलाई मानिसिक तनाबमा राख्न पनि यो महिनाले ठूलै भूमिका खेल्छ नै । राजनीतिसँग सँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो महिनाको विशेष महत्व छ नै ।
जब सुपरटेनले कठालो समाए
लक्ष्मण कार्की– यत्ति सानो मान्छेले पनि चोर्ने ? पछाडिपट्टिबाट आएको धोद्रे स्वरले मलाई झसंग बनायो । झस्किसक्दा नसक्दै कसैले मेरो कठालोमा समातेर उचालिसकेको थियो । आफ्नै धुनमा उत्तर लेखिरहेका बेला भोग्नुपरेको यो विपत मेरो सातोपुत्लो उडाउन पर्याप्त थियो ।
नेपाली क्रिकेटका मुख्य ३ समस्या
जनकराज भट्ट, काठमाडौ – अहिले नेपाली क्रिकेटमा ३ वटा मुख्य समस्या छन् : पहिलो, उमेर समूहका खेलाडीहरु तथा बेन्चस्ट्रेन्थको अभाव । दोश्रो, स्थायी तथा उपयोगी क्रिकेट लिग र पूर्वाधारको अभाव र तेश्रो, राज्य तथा गैरराज्य पक्षको उदासिनता हो । यी सबै समस्याका बाबजुद नेपाली खेलाडीहरुले देखाएको साहस र प्रदर्शन अतुलनीय छ ।
चोली नरंग्याउने त्यो होली
मिलन तिमिल्सिना – होली आउने बेला पहिले पनि गीत सुनिन्थ्यो ‘होलीले मेरो रंग्यायो नयाँ चोली ।’ गाउँठाउँमा जन्मे, हुर्केका हामीलाई थाहा भएको त होलीमा अनुहार रंग्याउने हो, चोली होइन । होलीमा चोली भिजाउनु र रंग्याउनुको अर्थ केटाकेटीमा थाहा हुने कुरा पनि भएन ।
उबेला र अहिलेका नारायण श्रेष्ठ
मिलन तिमिल्सिना - गाउँकै चरिमारे स्कुलबाट सातकक्षा पास गरेपछि माथिल्लो कक्षा पढ्न मैले अन्तै जानुपर्ने भयो । आफैं भात पकाएर खान नसक्ने स्यान्द्रे र लुते भएकाले धादिङबेसी या गजुरीमा डेरा गरेर राख्न बाआमालाई मन भएन । त्यसैले चरौंदी पारी गोरखा घ्याल्चोकको सीता दिदीलाई मेरो जिम्मा लगाइदिनुभयो ।
गुफाभित्रबाट रिपोर्टिङ गर्दा
बोमलाल गिरी– गएको भदौ २३ गते काठमाडौमा न्यु मिडिया गुफामा बसेका हामीहरु त्यसको ५ महिनापछि ग्रामीण मिडिया गुफाका लागि पोखरातिर गयौं । यसपटकको गुफा पहिलेको भन्दा धेरै अर्थमा भिन्न थियो । पहिले न्यु मिडिया (इमेल, इन्टरनेट, फेसबुक, ट्वीटर, स्काइप आदि) बाट समाचार संकलन गर्नुपर्ने थियो ।
त्यो देश बाहिर कसरी पुग्यो ? प्रश्न खट्किरह्यो
सिल्भिया राजोपाध्याय – सदा झै इमेल खोलें, सधैं नै आइरहने एउटा विदेशी अनुवादसँग सम्बन्धित संस्थाको इमेल 'URGENT' लेखिएकोले पहिले पढें । करिब ५०० वर्ष जति पुरानो लामो पौभामा रहेका शब्दको अनुवाद गर्नुपर्ने, नेपाली अक्षर हो कि होइन निश्चित गरेर छिटै जवाफ पठाउँ भन्ने आशयको इमेल रहेछ ।
कलंकीमा यात्रुलाई यसरी घुमाइन्छ फन्फनी
मिलन तिमिल्सिना - पछिल्तिर झोला भिरेर माइक्रोबसबाट कलंकी चोक ओर्लने बित्तिकै स्यालले कुखुरा झम्टेझैं दुई/तीनजना मान्छे हात तान्न आइपुगे । एउटाले बोकिरहेको झोला नै समाउँला झैं गर्यो । ‘ए दाई कहाँ जाने, पूर्व हो ?’ हैन भन्न नपाउँदै अर्को तान्न आइपुग्यो–‘पश्चिम कहाँसम्म, नारायणघाट, बुटवल...?’
न पण्डितले शास्त्र माने, न जजमानले
मिलन तिमिल्सिना/उज्यालो । फागुन २० - हतारमा विहे गरेर फुर्सदमा पछुताउने ! नेपाली समाजमा प्रचलित उखान हो यो । विवाहजस्तो महत्वपूर्ण क्षणमा मात्रै होइन, अरु कामधन्दामा समेत हतार गर्नु हुँदैन नत्र पछुताउनुपर्ला भनेर यो उखानले सचेत गराउन खोजेको छ ।
बिहेको साईत भेट्न बेहुला मोटर साईकलमा जन्ती बसमै अलपत्र !
विनोद ढकाल - आइतबार विहान हामी ४ जना गोरखाबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै थियौं । सामान्यतया गोरखाबाट काठमाडौसम्मको झण्डै १ सय ४० किलोमिटर यात्रा सार्वजनिक यातायातले सरदर ४ घण्टामा पार लाउँछन् ।
सडक बालबालिका : समस्या सडकमा हैन घरमा
भीमसेन राजवाहक - विवेक सानैदेखि सडक बालबालिकाप्रति संवेदनशील भयो । उस्को जन्म दिन हो फेब्रुअरी २५ । यो पालि जन्मदिनमा केही बालबालिकालाई खाना खुवाउने र एकजोर लुगा दिने मन गरेर सात समुद्रपारिबाट फोन गर्‍यो । मैले “उनीहरुसँगै तेरो जन्मदिनको केक काटेर मनाउँछौ” भनेपछि उ झन खुसी भयो ।
लंगौटी खोल्ने बाबा र बुटी खोज्ने युवा
मिलन तिमिल्सिना - गाउँमा छँदा शिवरात्रीको बारेमा त्यति धेरै थाहा भएन । स्कूल विदा हुन्थ्यो । विदा भएको बेला गोठालो जानुपर्थ्यो । शिवको बहान गोरु र गाईबाख्रा लिएर वन जानुपर्ने भएकाले मन्दिर र मेलाको उतिसारो मेसो भएन ।
विज्ञानको नवीन खोजमा तल्लिन नेपाली दम्पती
सन् २००९ मा उनीहरुले बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक सके । नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको यो संकायको पहिलो ब्याचका उत्कृष्ट दश विद्यार्थीमध्ये परेका यी जोडी सन् २०१० मा विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए । जनकपुरको एउटा मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेका जितेश र काठमाडौंकी सावित्रीबीच प्रेम विवाह भएको हो ।
मध्यरात आर्यघाटमा जब चिता जल्न थाल्यो
मिलन तिमिल्सिना – आर्यघाटमा जलिरहेको चिता एकटकले हेरिरहँदा लाग्दोरैछ जीवन केही होइन । तर त्यहाँबाट निस्केर फेरि यहीँ नफर्कंदासम्म त जीवन फेरि धेरैथोक हो पनि रैछ । बाँचुञ्जेल काम, माम, दाम सबै चाहिँदोरैछ ।